20 / 06 / 2021 20 / 06 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 201 Views စာ0မှတ်ချက် အဆိုပါနောက်ကွယ်မှ, ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ, Lego, LEGO House, Lego ကမ္ဘာကြီးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်, ဥပဒေ, LEGOLAND ကယ်လီဖိုးနီးယား, LEGOLAND ကယ်လီဖိုးနီးယားအပန်းဖြေစခန်း, LEGOLAND ဖလော်ရီဒါ, LEGOLAND ဖလော်ရီဒါ Resort ကို, LEGOLAND ဝင်ဆာ, LEGOLAND ဝင်ဆာအပန်းဖြေစခန်း, မော်ဒယ်လုပ်သူ, ကမ္ဘာကြီးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ LEGOLAND အပန်းဖြေစခန်းများသည်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အတွက်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုသည်အဆောက်အအုံဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ဥယျာဉ်များအတွင်းဆွဲဆောင်မှုအသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။
Planet LEGOLAND သည် LEGOLAND ဝင်ဆာနှင့်ဖလော်ရီဒါအပါအ ၀ င်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ LEGOLAND ဆောင်ပုဒ်အချို့တွင်ဖွင့်လှစ်ထားသည်။ သူသည်နောက်ခံနောက်ကွယ်မှဗီဒီယိုကိုပြန်လည်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီးRebရာမ Rebuild the World မော်ဒယ်၏တည်ဆောက်မှုကိုပြသခဲ့သည်။
အဓိကမော်ဒယ်လ်နှင့်အတူသေးငယ်သောတည်ဆောက်မှုအနည်းငယ်ကဖန်တီးခဲ့သောသတ္တဝါများကိုမူလယုန်နှင့်ဆင်တူသည်။ ကန်art စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး။ ဤရွေ့ကားစကိတ်စီးနဂါးကနေဒုံးပျံစွမ်းအင်ရဲတိုက်အထိ။ ဒီဗီဒီယိုကမော်ဒယ်အမျိုးမျိုးကိုတစ်ပြိုင်တည်းဖန်တီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကမ္ဘာအနှံ့ဖြန့်ဝေနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။
LEGOLAND ကယ်လီဖိုးနီးယားသည်မကြာသေးမီကဤစွဲမက်ဖွယ်ရာပါ ၀ င်သည့်ပန်းခြံများစာရင်းတွင်သူ့ဟာသူထပ်မံထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ယခုအခါသူတို့၏ဗားရှင်းသည် guests ည့်သည်များအားယခုအခါဖွင့်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ၂၃၅,၀၀၀ အပိုင်းအစကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။
Lego®ကမ္ဘာကြီးကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ပါ - PLANET LEGOLAND®ယခုပွင့်နေပြီ။ ? ဤစွဲငြိဖွယ်တည်ဆောက်မှုအသစ်အတွေ့အကြုံသည်ကလေးများနှင့်မိဘများအားသူတို့၏စိတ်ကူးများကိုထုတ်ဖော်ရန်၊ သူတို့၏အိပ်မက်ကမ္ဘာကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်အားပေးသည်။ Lego အုတ်ဖို၊ ? pic.twitter.com/NWutU6BFid
- LEGOLAND ကယ်လီဖိုးနီးယားအပန်းဖြေစခန်း (@LEGOLAND_CA) ဇြန္လ 16, 2021
အဆိုပါ Lego ဤအတွေ့အကြုံအတွက်တည်ဆောက်မှုများကိုနာရီပေါင်း ၅၅၀ အသုံးပြုခဲ့သည့်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည့် Group မှမော်ဒယ်လ်ထုတ်လုပ်သူများ Lego House လည်းမကြာသေးမီကတစ် featuring သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ပြပွဲဖွင့်လှစ် အလားတူ - ဒီဇိုင်းဘောလုံး.
← ဘယ် LEGO အစုံကအသေးစားဓာတ်ပုံတွေရှိသလဲ။
LEGO ရထားတွေကိုသင့်အိမ်ကဘယ်လိုဖြတ်ရမလဲ →